Rajeyn iyo cabsi
Niyad jab iyo cabsi.
HOPE waxay fadhiisatay irdaha samada oo waxay fiirisaa golayaasha ilaahyada.
"Soo gal, yaabka yaab!" Ayaa martiqaadka jannada ku qayliyey oo noo sheeg cidda aad tahay iyo waxa aad naga rabtid.
Rajada ayaa gashay Hawada ku saabsan farxaddeeda iftiin iyo farxad ka hor inta aan la aqoon Jannada. Inteeda dhexdeeda, quruxdu way madoobaatay, oo waxay caan ku dhigtay taajkeedii, xooggiisuna waxay siisay ushaheeda, iyo muuqasho wax kasta oo loo baahan yahay oo loo furay indhaha dadka aan dhiman karin. Iftiimin ku saleysan indhaha ayaa laga soo saaray indhaha Rajada. Waxay ku neefsatay udgoon aan caadi ahayn dhammaantiis. Waxay tilmaamtay ficilkeeda nolosha koritaanka farxadda waxayna muujisay noocyo qurux badan oo qurux badan. Codkeeduna wuxuu duubay dareemayaasha, wuxuu xoojiyay dareenka, wuxuu qalbiga ka dhigay inay si farxad leh ku garaacdo, awood cusubna u siiso ereyada, oo waxay ka heesi jirtay heeso ka macaan kan ugu waaweyn kuwa loo yaqaan 'choisters'.
“Waxaan rajeynayaa, inan ku dhashey oo loo magacaabay Thought oo ah aabihiin, waxaana ku barbaaray Desire, boqoradda dhulka hoostiisa, iyo amiirka gobollada dhexe ee adduunka. Laakiin in kastoo sidaas la iigu yeeray isagoo ah waalidkii aan dhiman, haddana waxaan ahay mid jira, waalid la'aan, iyo weligiin sida aabbaha ugu weyn wax walba.
“Waxaan u hadashay Abuuraha markaan uurku abuuray, oo uu igu afuufay jiritaankiisa. Markii aan ku gudajiray beedka guud ahaan, waan ku farxay jeermiga waxaanan ku toosay tabarta ay nolosha ku yeelan karto. Markii aan ahaa uurjiifka iyo moodada adduunka, waxaan ku heesay heerarka nolosha waxaanan ka soo qeybgalay xaddiga goobahooda oo qaabab ah. Aniga oo ku dhawaaqaya dabiicado dabiici ah ayaan ku ammaanay magacyada Eebahood dhalasho ahaan, laakiinse ima ay maqlin. Waxaan la socday carruurta dunida, Oo waxaan ku dhex hadlay riyooyinka farxadda leh, Waxaan ka dhex hadlay waxyaalahan yaabka leh iyo ammaanta cajaa'ibka leh, oo madaxooda, laakiinse isaga ma ay aqoon. Waxaan tusay waddo dhalaalaysa oo samada loo fuulo, oo jidadkeedana qalloocan baan ku arkay, laakiinse indhahoodu ma gartaan iftiinkayga, Oo dhegahoodu codkayga ma gartaan, oo haddaan dabkii aan dhimanin uu ku soo dego iftiinka aan siin doono, Quluubtu waxay noqon doonaan meelo allabari, waxay noqon doonaan kuwa aan la aqoon oo aan la aqoon, oo waxay u gudbi doonaan qaab dhismeedkoodii loo yeedhay, iyada oo aan lagu gaadhin wixii loogu talo galay.
Kuwa i arka, Weligay illoobi maayo. Wiilasha jannada ku dhex jirayow, bal wax walba fiiri! Aniga ila soo kici kara meelaha ka sarreeya meerahaaga jannada, iyo meelaha dhaadheer ee sharafta leh iyo kuwa aan weli muuqan. Laakiin aniga yaanan laygu khiyaanayn, haddii kale waxaad lumin doontaa xumaantaada, rajo-darrida, oo waxaad ku dhici doontaa meelaha ugu hooseeya ee Jahannamada. Weli, Jahannamada, Jannada, ama ka shishaysaba, waan kula jiri doonaa hadaad sidaas rabto.
“Adduunyada la muujiyey, howshaydu waa in aan ku dhiirrigeliyo waxa aadanaha oo dhan in aan la gaadhin. Anigu ma dhinto, laakiin qaababkaygu waa dhimanayaa waana ku soo noqon doonaa waligood oo qaabab isu beddela ilaa aadamuhu ka dhammaado. Adduunyada la muujiyey ee hoose waxaa laygu magacaabi doonaa magacyo badan, laakiin kuwa yar baa i aqoonsan doona sidaan ahay. Kuwa garaadka lahu way igu ammaani doonaan sidii xiddigtooda cirwareenta loo yahay, oo nuurkayguna ha ku hoggaamiyo. Kuwa wax bartay waxay iigu dhawaaqi doonaan khayaano waxayna igu xukumi doonaan in la iga fogaado. Anigu waxaan ahaan doonaa kuwa aan lagaranaynin duniidaha hoose kan kii aan ka dhex muuqan.
Isaga oo sidaas ula hadlay ilaahyadii carooday, Rajada ayaa joogsatay. Oo iyana, markay maqleen amarradeedii, waxay u kacdeen sidii mid qudha.
Kaalay, adigoo aad u jecel, mid walbaa wuxuu ooyay oo yidhi, Anigu waxaan kuu sheegaa sidaad ii leedahay.
"Sug," ayuu yidhi rajo. Wiilahii Abuurahayow! dhaxla Jannada! kii isagu isaga sheegaa naftiisa oo keliya ayaa garanaya sida aan ahay. Ha degdegin Ku hanuusho waxa aad doorato Sababta, heshiisiinta ilaahyada. Sababta igu kaliftay ayaa igu leh: Bal ii eeg sidaan ahay. Ha igu khaldin foomamka aan ku noolahay. Haddii kale waxaan kugu dhaafayaa inaad ku wareegaan dunida oo dhan, oo waxaad is ahaan doontaa inaad isqarxiso oo aad igu raacdo oo aad dhulka ugu tagto farxad iyo caloolxumo weligeed soo noqnoqda ilaa aad igu hesho daahirka iftiinka, oo aad soo noqoto, oo lagaa soo furtay ila jannada.
Waxaan ku hadlaa aqoon, duco, dhimasha la'aan, allabari, xaqnimo. Laakiin kuwa yar oo codkayga maqli doona waa garan doonaan. Waxay beddelkeeda ii tarjumi doonaan afka qalbiyadooda oo aniga aniga ayaa raadin doona qaababka taajirnimada adduun, farxad, caannimo, jacayl, awood. Hase yeeshe, wax kasta oo ay doondoonaan ayaan isaga ku waansiin doonaa; Markaa helitaanka kuwan oo aan helin waxay raadinayaan, weligood way dagaallami doonaan. Markay ku dhacaan, ama u muuqdaan inay weli gaadhaan mar labaad, waan hadli doonaa, oo codkaygay maqli doonaan, oo mar labaad waxay baadhayaan. Had iyo goorba way i doondooni doonaan oo way dadaali doonaan ilaa ay naftooda raadsadaan oo aan abaalgudkayga ahayn
Nacas yahow, caqli yeelo! Sababta la maqlo, ama waxaad isku qaldin doontaa walaashayda mataanaha ah, Cabsi, iyadoo aan weli adiga kuu aqoon. Iyada oo cabsi ka haysata hortooda, xoogna way madhan tahay weligeedna waxay sii haysataa qalbigiinna sidii ay iigu qarisay indhahaaga.
Waan iscasilay naftayda. Igu naxariiso. Ha i iloobin. Waa i kan. Aniga sidaad doonto u qaado.
Rabitaanku wuxuu toosay ilaahyada. Mid kastaaba wuxuu arkay rajo wax aan ahayn laakiin ujeedka hamigiisa ee toosay. Dhago-la'aan Sababta oo ay ku faanto abaalmarinta aragtida, waxay horumareen oo cod guux leh ayaa yiri:
“Waxaan kuu rajeynayaa rajo. Weligaa adaad leedahay.
Iyadoo ardor mid walbaa uu dhiiranaa si uu u soo jiito Rajada Nafsadiisa. Laakiin xitaa sidii ay umuuqday inuu ku guuleystay abaalmarintiisii, Rajada ayaa carartay. Iftiinka Cirka ayaa la soo baxay isagoo rajo leh.
Sida ilaahyadu ay u degdegeen inay Rajada raacaan, hooska xun ayaa ka soo dhacay irdaha samada.
"Soo noqo, jiritaanka qaldan," ayay yidhaahdeen. Waxaan dooneynaa rajo, mana ahan Shax aan qaab laheyn. ”
Neef dhuuban ayaa Shaashadu u hadashay:
Waxaan ahay cabsi.
Xasiloonidii geeridu waxay ku degtay dhammaan intii ku dhex jirtay. Boosku wuu gariiray sidii sanqadhii uu u dhawaaqayay magacii baqalaha ahaa ee dib loogu soo celiyey dunidoo dhan. Hadalkaasi wuxuu u ooyay murugada murugada, oo oohinta murugada badan ee adduunyada ee xanuunka iyo murugada dadka aad u xanuunsan ee murugada aan dhamaadka lahayn.
Baqdin baa yidhi, Kaalay, oo rajo baad iga dhigtay, oo waad ii yeedhay. Waxaan kaa sugayaa irdaha samada hortiisa. Ha Raadin Rajada. Iyadu waa iftiin yar oo duulaya, oo waa iftiinka fosfooraska. Waxay ku sii dhaartaa ruuxa riyooyinka, Kuwa iyada ku dhaceyna waxay ii noqdaan addoomo. Rajadii waa dhammaatay. Jannooyinkaaga qurxoon joog, oo ilaahyo ah, oo irdaha gudub, oo addoommo xaggaaga ah, oo waxaan kugu ridi doonaa meel sare oo rajo ah oo rajo la'aan ah, oo waxaad heli doontaa weligeed weligeed. Markii ay dhalleeceyso oo aad u gaartid inaad iyada qabatid, waxaad iga heli doontaa meesheeda. Bal i eega! Cabso.
Oo ilaahyadiina way arkeen cabsida, wayna gariireen. Irdaha gudahooda waxaa ku dhex noolaa nolol madhan. Bannaanka oo dhan wuu madoobaaday, oo gariirradii cabsida ayaa ka dhex dillaacday meel bannaan. Xiddig cirro leh ayaa jabay iyo codkii daciifay ee Rajada ka dhex dhawaaqaya gudcurka.
Ha ka baqin cabsi, Iyadu waa hadh yar. Hadaad wax ka barato iyada dhib kuma laha. Markaad dhex martaan oo aad cabsiisaan cabsida, Waad isdhibi doontaan, waad helaysaan, oo anna xagga jannada ayaannu ku noqonaynaa. I soo raac, oo sababtu ha kuu hagto.
Xitaa Cabsida kama hor joogsan karin kuwa dhiman kara ee dhagaysta codka Rajada. Waxay yiraahdeen:
Way ka wanaagsan tahay inaad ku warwareegto meel aan la garanayn oo rajo leh oo aan jannada bannaan oo lahayn albaabbada. Waxaan raacnaa Rajada. ”
Isaga oo isku halleeya ciidankii aan dhiman karin ayaa jannada ka tagay. Iridda dibedda, Cabsida ayaa qabatay oo hoos u dhigtay oo ka dhigtay inay illoobaan wax kasta oo aan ahayn Rajada.
Iyagoo cabsi iyo baqdin ku haya dunidii madoobaa, kuwa dhimanaya ayaa dhulka ku soo degay wakhtiyadii hore, oo waxay hoyadoodii la joogeen oo ka dhex baxeen nimankii dhintay. Rajada ayaa la timid. Waqti dheer, waxay ilaaween cidda ay yihiin oo aan awoodin, marka laga reebo Rajada, xusuusnow halka ay ka yimaadeen.
Rajadu waxay ku dhacdaa qalbiga dhalinyarada, Kuwaasoo dhalinyarada ku arka jidka toosan. Dib-u-eegid hore iyo daal xagga dib-u-eegista dhulka rajo bay leeyihiin, laakiin cabsi ayaa timaadda; Waxay dareemaan culeyska sanadaha iyo Rajada wanaagsan ka dibna waxay u jeediyaan jannada. Laakiin markay rajo qabaan waxay fiirinayaan jannada, Cabsida ayaa qulqulaysa oo ma arkaan jidkii dhaafsanaa, geeri.
Cabsi aad u badan ayaa cabsi daran, Oo wax dhimmanna dhulkuu ku dhex wareegaa isagoo illowsan, laakiinse rajo baa leh iyaga. Maalin maalmaha ka mid, iftiinka lagu helo daahirnimo nolosha, waxay baabi'in doonaan cabsida, waxay heli doonaan rajo, waxayna ogaan doonaan naftooda iyo Jannada.